SomaliTalk.com » DAMACII LIITEY – Qore: Dr. Eenow
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Monday, April 9, 2012 // 1 Jawaab
Damacu waa tilmaan aad u liita oo qofkii wax isku falaaya uu ka xishoodo. Waa tilmaan la xiriira aragti ku dhisan dugaagnimo, taas oo ka dheer garaadka hagaagsan iyo garashada wanaagsan. Qofku markuu damco in uu wanaagga iyo kheyrka badsado, laguma tilmaamo qof damac-xumi ay qaadey. Bal waxaa la yiraahdaa, waa qof leh han sare oo uu tiigsanayo iyo hiraal qurxoon oo u muuqda. Dhan-kale, damacu waa fal-celis ka yimaada liidasho iyo u-muhashada walxaha ay naftu jeceshahay. Qofkaasi wuxuu isku luraa doonis dhal-dhalaal adduun iyo wax uusan calaf ku lahayn.
Dadka damaacleyda ah, muhashada adduunka oo ay ku qahran yihiin waxaa u weheliya fuleynimo iyo garaad-xumi. Iyagu waa dad ay noloshu cabsi badan ku heyso, taas oo ay garan la’yihiin sidii ay u maareyn lahaayeen humaagga cabsidaas iyo xanuunka ay ku heyso. Arintaas ayaa u sabab ah in ay mar walba doonaan wax badsi iyo waxyaabo ayan xaq u heleyn. Markaas ayaa waxay ku kacaan gafaf ay ka maarmi kareen falalkooda. Yaasiin Cismaan Keenadiid, qaamuuskiisa af-soomaaliga, fasiraadda uu ka bixiyay ereyga Damac waxaa kamid ah Hunguri-wayni.
Dadnimada iyo gobanimada waxay la xiriirtaa in qofku qanaacad leeyahay oo uu ka maarmo wax kasta oo uusan xaq u lahayn. Kuna qanco saamiga xagga Eebe (kor ahaaye) looga gartey. Caqli-xumida iyo gunnimadana waxay la xiriirtaa in qofku uu hunguri-waynaado oo mar walba uu doono wax uusan xaq u lahayn. Qof damac badan waa qof qahran, kana dheer in uu guuleysto. Isagu wuxuu ku dhintaa noloshan aynu joogno, nolosha danbena dembi badan ayuu kula hoydaa. Eebaha boqorka ah (kor ahaaye), goor hore ayuu tusaale inaga siiyay kuwa damacu qaadey. Si xikmad ku dheehan tahay ayuu inoogu tilmaamay aragtidaas xambaarsan tallaalka guracan, kaas oo naftii uu gaaro ay si-xun ugu hiraan-hireyso dunida iyo walxaheeda.
Waxaa taas u weheliya in damucu uusan ahayn mid qofkiisa baahi-tira si kasta oo uu gacanta ugu dhigo wixii markaas u muuqdey ee uu u muhoonayay. Markasta oo qofka damaca leh uu gaaro arin uu higsanayey, wuxuu ka-qaadaa damac kii hore ka wayn. Markaas ayuu daba cararaa mac-macaanka nolosha, isaga oo sidii eygii feeraha ka guuxaya.
Qof damac qaadey kii ugu liitey iyo meeshii ay noloshiisii ku abyootey waxaa inooga sheekeynaya Eebaha xilli-walba joogey ee talada iyo hanuunka ay xaggiisu ahaadeen. Ogaalka la xiriira dhacdadii heshey qofkan iyo waynanka ay qisadu leedahay, ayuu Eebe (kor ahaaye) tusaale inoogu soo qaatey. Tusaalahan waa nin aadami ah kaas oo nolosha ka gaarey darajooyinka sare ee cirka laga bixiyo. Darajo ka duwan kuwan humaagga maalmo la-noolka ah. Isla-ninkan ayaa misana damac dartiis u soo hoobtey darajooyinka ciidda yaal ee lagu tunto. Eebe (kor ahaaye) wuxuu inoo xusey sawirka ay yeelanayaan kuwa damaca badan. Isla-markaa wuxuu inoo tilmaamey in kuwaas ay lamid yihiin eeyada oo kale ee feeraha ku guuxaya.
Kuwa habeen iyo maalin u taagan boobka addoomada Eebe, kuwa hunguri-wayni darteed ayan u kala soocneyn xaaraanta iyo xalaasha, kuwaas ayuu Eebe (kor ahaaye) wuxuu ku tilmaamay eey hiraan-hiraya oo goor kasta carrabka laad-laadinaya.
Xayawaankan eyga ah ee tilmaanta loo soo qaatey waa xayawaan xaqiran ee la adeegsado. Isla-markaas wuxuu kulansadey tilmaamo ay ka muuqato liidasho iyo hooseyn. Waa fuley oo intaas hoos ayuu u jeedaa. Hoos u-jeedka waxaa ku khasbey damac uu ka qabo in uu dhulka luf-luf ka helo iyo isaga oo aanan qorshaha ugu jirin in uu meel dheer wax ka ugaaran karin. Damaciisa liita iyo hankiisa hooseeya ayuu ku muteystey fool-xumida intaas le’eg.
Taasi waa hadduu baahan yahay iyo hadduu dhergan yahay labaduba. Eebe (kor ahaaye) wuxuu inoo sheegayaa tilmaamahaas aanu soo xusney mid ka liidata oo uu eygu leeyahay. Waa tilmaanta ah in uu hiraan-hiro oo carrabka laad-laadiyo. Suuradda Al-Acraaf, aayadaheeda labada ah ee 175-aad iyo176-aad, Eebe (kor ahaaye) wuxuu si kooban inooga sheekeynayaa ninkaas kharibmey oo eyga lagu mataaley. Aayaduhu waxay leeyihiin:
1. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ‪. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
Khabarka ay tebinayaan aayadahan labada ah, waa mid xambaarsan dhacdo murugo badan. Waxay tahay sheeko la xiriirta nin caalim ahaa oo caabid ahaa, kaas oo sabirkiisa iyo yaqiintiisa ay gaarsiiyeen in xagga Eebe (kor ahaaye) laga aqbalo dacwadaha uu gudbisto. Ninkaasi oo kamid ahaa raggii raacey nebi Muuse (nabadgelyo dushiisa ha ahaatee) ayaa waxaa lagu sheegaa in magaciisa la oran jiray Bilcaam bin Baacuuraa. Darajadaas sare ee uu heley waxaa u raacey ayaan-darri tii u liidatey.
Sheydaan ayaa wuxuu u qurxiyey dhal-dhalaalka adduunka. Mac-macaankii xaaraanta ahaa ee uu jecleystey ayuu ku fogaadey, markaas ayuu wuxuu garan waayay in ay jirto maalin korontada laga daminayo. Xumaantii uu sameynayay oo uu ku fogaadey ayaa wuxuu la illaawey in cimrigu ka dhamaanayo, wakhtigana uusan ahayn agab dib leysugu celiyo. Markaas ayaa wir-wirka nolosha waxaa uga dhex-muuqdey, male ah in ayaamuhu ay u waarayaan.
(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ)
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ
1 Jawaab " DAMACII LIITEY – Qore: Dr. Eenow "
Ibrahiimqaliil Hussein says:
Sunday, April 29, 2012 at 10:09 pm
Doctorka waxaan leeyahay khayr allaha kusiiyo waxaad kamidtahay dadka yar ee soomaalida wax qora hadana xaqiiqda kusalaysan qoraaladooda waxaan kaarajaynayaa in aad qoraaladaada sidaan oo kale noogu siiwadid haduu waynaha idmo.